China SEBIC 20 inch aluminium miafina bateria mitifitra bisikileta mandeha amin'ny herinaratra ary mpanamboatra | Funncycle
Laharana maodely BEF-CL20
filanjana 20 * 1.75 ″ firaka aliminioma 6061, lasina TIG
Fork Steel TIG nohosorana 20 ″
Crank Set Firavaka vy vy rojo vy
kodiarana INNOVA 20 * 1.75 ″ A / V Mainty
Bateria 36V 7.5AH, Battery Lithium, misy charger-SANS 2A
Mandehana ny lavitra. Noho ny motera 250W tena mandaitra, ny mpitaingina hatramin'ny 264 lbs dia afaka mandeha 15,5 kilaometatra amin'ny herinaratra fotsiny. Ampifamadiho ny maody haingam-pandeha amin'ny tsindry bokotra iray ary ahatratra ny haavon'ny max throttle hatramin'ny 18.6 mph. Te hijanona ho mavitrika na hitehirizana bateria? Manaova pedal toy ny bisikileta nentim-paharazana dia avy eo mifamadika amin'ny maody pedal-to-go handresena ireo havoana mideza na hahazoana aina haingana. Miaraka amin'ny herin'ny bisikileta elektrika SEBIC dia lalao ho an'ny ankizy ny fandresena ny fironana 25 degre.
Aza mety ho tratry ny tsy misy fahefana. Vohay ny batterie lithium-ion 36V ary avadiho miaraka amin'ny bateria faharoa (amidy misaraka). Ny bateria azo esorina dia azo fenoina ranom-boankazo rehefa miraikitra na tafasaraka amin'ilay frame. Tao anatin'ny 3-4 ora monja dia ho ranom-boankazo sy vonona hilomano ity eBike mandoa vola haingana ity.
Ny CL20 dia misy kodiarana feno rivotra amin'ny kodiarana 20-inch izay manome fitoniana sy fitoniana tsara kokoa. Coil shock miaraka amina preload azo ahitsy sy ny freins misy disres roa mitambatra mba hanomezana CL20 mitaingina malefaka tsy tapaka miaraka amin'ny hery mijanona tsy miovaova. Ny haitao moka "Autoguard" manokana dia miantoka ny fijanonan'ny motera rehefa tafiditra ny frein.
Ny zavatra rehetra ilainao amin'ny mitaingina lavorary dia tafiditra ao anaty boaty. Fitaovana miendrika paddle ergonomika sy seza azo ovaina hahazoana fampiononana faran'izay betsaka. Ny môtô hub an'i CL20 dia voaaro amin'ny hafanana be loatra amin'ny alàlan'ny hafanana alimina izay manampy amin'ny fifehezana ny hafanan'ny motera.
Miaraka amin'ny bisikileta elektrika lavitra CL20 azo aforitra avy any SEBIC, lasa nihatsara kokoa ny dia nataonao.
Teo aloha: SEBIC 700c môtô afovoan'ny herinaratra mandeha bisikileta an-tanàna
Manaraka: Bisikileta elektrika SEBIC 700C 6061 bisikileta mahery vaika